EFA AO ANATINAO NY FANJAKAN’ANDRIAMANITRA. – filazantsaramada
Publié parfilazantsaramada	 décembre 5, 2014 décembre 5, 2014 Laisser un commentaire sur EFA AO ANATINAO NY FANJAKAN’ANDRIAMANITRA.
«Ary Jesosy, nony nanontanian’ny Fariseo izay andro hihavin’ny fanjakan’Andriamanitra, dia namaly azy hoe: Tsy misehoseho ny fihavin’ny fanjakan’Andriamanitra. Fa tahaka ny helatra manelatra hatramin’ny faravodilanitra ka mahazava hatramin’ny farany koa, dia ho toy izany ny Zanak’olona amin’ny androny.» (Lioka 17: 20, 24)
Advento, fotoana fiomanana sy fiandrasantsika ny fahatongavan’i lay Kristy ny andro toy izao. Dia i Kristy, Ilay mpanafaka antsika amin’ny geja sy ny fanandevozan’ny satana. EFA AO ANATINAO NY FANJAKAN’ANDRIAMANITRA, ary azontsika tamin’ny alalan’ny fanoratana ny anarantsika ho isan’ny mpandova miaraka amin’i Jesosy, nanomboka teo amin’ny Batisa Masina izany. Hoy indrindra Jesosy: «Ary ny olona tsy hanao hoe: Indro, ety! Na ery! Fa, indro, ny fanjakan’Andriamanitra dia ao anatinareo.» (Lioka 17:21). Ambonin’izany anefa, miomana hatrany ny amin’ny fihavian’i Jesosy Kristy eny amin’ny rahon’ny lanitra ny mino rehetra ankehitriny. Na dia ianao koa aza, mety hametraka fanontaniana hoe: Manao ahoana re izany fihavian’ny fanjakan’Andriamanitra izany?
Tamin’ny fotoana nitorian’i Jaona mpanao batisa ny amin’ny fihavian’i Jesosy Kristy indrindra, raha tsaroantsika tsara dia ambetinteniny ny amin’ny tokony hibebahan’ny olona rehetra satria efa manakaiky tokoa ny fanjakan’Andriamanitra. Io fanjakana manokana io dia lazainy amin’ny fomba fiteny hoe: «Fanjakan’ny lanitra». Hoy izy ao amin’ny (Matio 3:2): «Mibebaha hianareo; fa efa akaiky ny fanjakan’ny lanitra». Mampiomana ny olona rehetra izy fa ho avy ny Kristy. Ny fanjakan’Andriamanitra araka izany dia tonga soa ao anatintsika rehefa avy nibebaka isika. Rehefa mahatsiaro fa diso amin’ny fo mangorakoraka isika ka mangataka amin’i Fanahy Masina mba hanova ny fo vatontsika ho tonga fo nofo dia indro ny tanan’Andriamanitra mahery, be fitiavana, mandray antsika sy mamafa sy helotsika ka mampiditra ny fanjakany ho ao anatintsika. Tsarovy tsara koa anefa, fa noho ny fisoloana heloka nataon’i Jesosy Kristy Tompo ho antsika dia mampiditra ao anatintsika ny fanjakany tamin’ny alalan’ny Batisa Izy. Izany no fitiavan’Andriamanitra antsika. Izany koa no ilazan’ny tenin’Andriamanitra fa tsy misehoseho ny fihaviny, satria ny olona miaiky ny fahotàny dia tsy mirehareha ny amin’ny heloka vitany, fa kosa, mitaraina sy mitalaho mandrakariva amin’i Jesosy mba ho rakofany amin’ny rany nalatsany ho ahy sy ho anao teo ambony hazofijaliana ny tsy fahamendrehana rehetra. Nataon’Andriamanitra ho an’izay mino izany, saingy miafina kosa ho an’izay rehetra tsy mety mino fa Jesosy no Kristy mpanafaka antsika. Tokony ho fantatsika mandrariva anefa, ny fanjakan’Andriamanitra resahana dia tsy tenenina amin’ny vava fotsiny ihany, na toriana amin’ny teny fotsiny ihany koa fa tokony ho hery lehibe mitoetra ao anatintsika ka manapaka ny fiainantsika manontolo. «Fa ny fanjakan’Andriamanitra tsy amin’ny teny, fa amin’ny hery» (1Korintiana 4:20). Toy izany no anambaràn’ny Paoly Apostoly azy. Karohan’ny olona mandrakariva izay misy ny fanjakan’Andriamanitra. Misy aza mihevitra fa eto amin’izao tontolo izao ihany no anorenana ny fanjakan’Andriamanitra. Ny eto dia mandalo. Ny ao anatintsika koa dia mandalo raha tsy mihazona mafy izay nomen’ny Jesosy antsika isika. Eto an-tany ihany koa anefa no hamolavolan’Andriamanitra antsika, ka hisantarantsika sahady izay efa nomanin’Andriamanitra ho antsika any amin’ny paradisa. Any no misy ny fanjakan’Andriamanitra maharitra mandrakizay. Fanjakana manafoana ny herin’ny fahamaizinana. Fanjakan’ny fiadanana.
Ry havana, miomàna isika fa amin’izao fihaviany faharoa izao dia ho avy amim-boninahitra Jesosy Kristy Tompontsika. Tsy fantatsika na ny ora na ny fotoana. «Dia miomàna koa hianareo; fa ho avy ny Zanak’olona amin’izay ora tsy ampoizinareo.» (Lioka 12:40). Rehefa voatory amin’izao tonolo izao ny tenin’Andriamanitra hoy ny Soratra Masina, vao ho tongany farany. «Ary hotorina amin’izao tontolo izao ity filazantsaran’ ny fanjakana ity ho vavolombelona amin’ny firenena rehetra, dia vao ho tonga ny farany.» (Matio 24:14). Raha ny fizotry ny asa fitoriana manerana izao tontolo izao no jerena, efa lasa lavitra tokoa izany noho ny hahavon’ny teknolojia ampiasaina (Gazety, Radio, Internet..sns), mainka moa fa noho ny fisian’ireo Misionera marobe manerantany. Angamba, tsy ny tenin’Andriamanitra no tsy ren’ny olona, fa izy mihintsy no tsy te handre izay lazain’ny tenin’Andriamanitra. Tsarao araka izany àry izay ora misy antsika ankehitriny. Jereo sao mbola misy anjara tsy vitanao. Mahaiza miomana tsara. Tandremo koa sao dia sondriantorin’ny fanaovana fahotana; ka tsy ho tafaraka amin’ny Tompo amin’ny andro fihaviany. Ho aminao ny fiadanan’nyTompo. Amen!
Publié parfilazantsaramada décembre 5, 2014 décembre 5, 2014 Publié dansUncategorized